Qoor Qoor oo lagu Eedeeyay in uu ku fashilmay Amniga deegaannada Galmudug - Awdinle Online
Xildhibaan Mursal Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefow oo la hadlay Mid kamid ah Idaacadaha Muqdisho ayaa sheegay in maamulka Galmudug uu ka gaabiyay wax ka qabashada amni darrada, culayska Al-Shabaab Degmooyinka saartay & dilalka aanooyinka salka ku haya.
Mursal oo xubin ka ah baarlamaanka Galmudug ayaa nasiib darro ku tilmaamay in sanad kadib la iska wareysto ammaanka Degmooyin katirsan Gobolka Galgaduud oo markii uu xilka la wareegayay Madaxweyne Axmed Qoor-Qoor isu socodkoodu wanaagsanaa.
Waxa uu sheegay in Al-Shabaab xoogga saartay kala jaridda Degmooyinka Galmudug, go’doominta qaybo kamid ah Mudug, culays saarista Dekedda Hobyo & deegaannada kale ee muhiimka u ah isu socodkeeda balse maamulka uu indhaha ka daawanayo.
Sababta waxa uu ku sheegay in Ciidanka sirdoonka aan la siin Mushaar, dhiirigelinta madaxda oo la waayay & askarta Daraawiishta ee la tababaray oo dib ugu laabtay Guryahooda kadib markii ay waayeen qorshe cad oo ay ku howlgalaan & cid ku dabagasha sida uu yiri.
“Waxaa nasiib darro aad u weyn nagu noqotay in amniga gudaha ee xorta ahaa uusan ahayn sidii loo baahnaa, colaado qabiil oo jiro, Shabaab oo culays saartay & Madaxda Galmudug oo aan waxba ka qaban, xitaa qaybo kamid ah Hiiraan ayay si ula kac ah usoo weerarayaan Al-Shabaab si ay u jaraan waddooyinka si ay u go’doomiyaan Dekedda Hobyo, mas’uuliyiinta Galmudug waxa ay ku mashquuleen waxyaabo aan is leeyahay waa laga maarmi karay” ayuu yiri Xildhibaan Mursal Sh.Maxamed Xeefow.
Waa uu sii hadlay Xildhibaan Mursal Sheekh Maxamed Xeefow waxaana uu sheegay in Xildhibaannada ay ku howlan yihiin la xisaabtanka Madaxda & xubnaha sida gaarka ah ugu xilsaaran sugidda amniga si looga jawaabo welwelka lasoo dersay Shacabka.
Previous articleWeerar jidgal ah oo lagu qaaday Kolonyo uu la socday Guddoomiyaha Shabeellaha Hoose
Next articleAl-Shabaab oo War kasoo saaray weerarkii Guddoomiyaha Shabeellaha Hoose & Saraakiisha Ciidamada